အဒမ်တောင်ထိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၂,၂၄၃ မီတာ (၇,၃၅၉ ပေ)
6°48′34″N 80°29′59″E﻿ / ﻿6.80944°N 80.49972°E﻿ / 6.80944; 80.49972ကိုဩဒိနိတ်: 6°48′34″N 80°29′59″E﻿ / ﻿6.80944°N 80.49972°E﻿ / 6.80944; 80.49972
ශ්‍රී පාදය ( සමනළ කන්ද), சிவனொளிபாதமலை
အဒမ်တောင်ထိပ် သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် အုပ်စောင်းပုံသဏ္ဌာန်တည်ရှိနေသည့် စေတီတော်တစ်ဆူ ဖြစ်သည်။ အမြင့်သည် ၂၂၄၃ မီတာ (၇၃၅၉ ပေ) ရှိသည်။ ၎င်းတောင်သည် သရိပဒ (ශ්‍රී පාද) ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာ တည်ရှိသဖြင့် လူသိများသည်။ ထိုခြေတော်ရာသည် တောင်ထိပ်အနီး တောင်ထိပ်မှ ၁.၈ မီတာ (၅ ပေ ၁၁ လက်မ) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုနေရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများက “ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာပွဲတော်” အဖြစ် ပွဲတော်များ ကျင်းပခြင်း၊ ဟိန္ဒဘာသာသက်ဝင်ယုံကြည်သူများက ဟန်နုမာန်နှင့် ရှီဗ “ရှီဝ၏ အလင်းရောင်တောင်” အဖြစ်ပွဲတော်များ ကျင်းပခြင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချို့က အာဒမ် နှင့် ပတ်သက်သည့် ပွဲများ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့က သူတော်စင် တောမတ်စ် နှင့် ပတ်သက်သည့် ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။
Conical shadow of Adam's Peak at sunrise (6:34 am).
A view of Adam's peak from Maskeliya during sunset.
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ခြေတော်ရာသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဘယ်ဘက်ခြေတော်ရာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သီရိလင်္ကာသို့ ကြွရောက်လာစဉ်က ချန်ခဲ့သည့် ခြေတော်ရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုခြေတော်ရာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနတ်ဒေဝါများက ပင့်ဖိတ်မှု၏ အရိုအသေပြုမှု လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ် ရှိနေကြသည်။
တမီလူမျိုး ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ကမူ ထိုခြေတော်ရာသည် ရှီဝ၏ ခြေတော်ရာဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုတောင်သည် ဒဏ္ဍာရီများ၌ သမိုင်းဝင်တောင် တြိကုတ (Trikuta) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုထားသည်။ ထို့အပြင် ရာမာယနခေတ်အခါကာလများက ရာဝဏ မြို့တော်လည်း ဖြစ်သည်။
↑ Seruwila to Sri Pada (Sacred Foot Print Shrine)။ UNESCO.org။
↑ Ricci၊ Ronit (2011)။ LITERATURE, CONVERSION, AND THE ARABIC COSMOPOLIS OF SOUTH AND SOUTHEAST ASIA။ University of Chicago Press။ p. 136။ ISBN 978-0-226-71088-4။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အဒမ်တောင်ထိပ်&oldid=639967" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။